Diyaarad Gaadiid Dagaal iyo Hub u sida ciidamada Dowladda oo ka degtay Doolow iyo Wararkii ugu danbeeyay | Xaysimo
Home War Diyaarad Gaadiid Dagaal iyo Hub u sida ciidamada Dowladda oo ka degtay...
Diyaarad Gaadiid Dagaal iyo Hub u sida ciidamada Dowladda oo ka degtay Doolow iyo Wararkii ugu danbeeyay
Wararka naga soo gaaraya Gobolka Gedo ayaa sheegaya inuu si xowli ah u socdo dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda Soomaaliya oo shalay iyo xalay la wareegay degmooyinka Doolow iyo Beledxaawo oo ay hore u maamulayeen ciidamo taabacsan maamulka Jubbalanad ee Axmed Madoobe.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in saaka ay diyaaradii ugu horeysay ka degtay garoonka degmada Doolow, iyadoo geysay gaadiid dagaal iyo hub laga qaaday magaalada Muqdisho, waxaana ciidamada dowladda ay shalay galab la wareegeen degmada Doolow, iyadoo saldhigyo ka sameystay gudaha iyo daafaha magaalada.
Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnaa oo ku dhow 2000 askari isugu geysay degmada Luuq intii aanay la wareegin Doolow iyo Beledxaawo, waxaana la sheegay inuu qorshahooda yahay xoreynta Gobolka J/Dhexe oo saldhig weyn u ah Alshabaab.
Ciidamadii taabacsanaa C/rashiid Janan ee ku sugnaa Doolow ayaa wararku sheegayaan inay ka baxeen halkaasi iyagoo ku sii jeed degmada Beledxaawo, inkastoo aysan gaarin, halkaasoo xalay ay sidoo kale la wareegeen ciidamada dowladda.
Qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday saldhig ciidanka xoogga dalka